ဤ Blog သို. ၀င်ရောက်ကြည်.ရှုသူ အပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျမ်းမာ ရှိနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ (မိဘပြည်သူ အပေါင်းအား စေတနာဖြင်.သာ မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့် အချက် ၈ချက်
ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ အနည်းဆုံး တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်တော့ သင့်မှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင်သတိမထား မိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဒီလို အမူအကျင့်တွေ ရှိနေရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ပြင်ဆင် လိုက်ပါ။
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းယှက်ပြီးထိုင်တာ စတိုင်ကျလှပပေမယ့် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ခြေထောက် သွေးကြောထုံးခြင်း(Varicose Vein)ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒူးအထက်ကနေ ခြေထောက်ကိုချိတ်ပြီး ထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးကြောတွေရဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိုအဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ကြမ်းပေါ်တစ်ပြေးတည်း ချထားတာဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ညီညီမျှမျှ ထိန်းထားပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
သွားပွတ်တံတစ်ချောင်းကို ကြာရှည်သုံးစွဲတာ မကောင်းပါဘူး။ သုံးလကို တစ်ချောင်းလဲ သုံးပေးပါ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ သွားပွတ်တံရဲ့အမျှင်လေးတွေက သင့်သွားရဲ့ကြွေလွှာနဲ့ သွားဖုံးကို ပျက်စီးစေတာကြောင့်ပါ။ သွားဖုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပွား နေချိန် မှာ အချိန်တစ်လ-တစ်လခွဲလောက်ကြာတိုင်း သွားပွတ်တံ တစ်ချောင်းလဲသုံးပေးပါ။ သင့်သွားပွတ်တံ အချောင်းတွေထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ရှင်သန်ခိုအောင်း နိုင်တာကြောင့်ပါ။ သွားဖုံးရောဂါက ကောင်းသွားတာနဲ့ သွားပွတ်တံ အသစ် တစ်ချောင်း လဲသုံးဖို့နဲ့ သွားတိုက်ပြီးတဲ့ အခါတိုင်း သွားပွတ်တံကို ရေနွေးနဲ့ဆေးကြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
စားသောက်ဆိုင် အများစုဟာ လာရောက်စားသုံးသူတွေ ခံတွင်းတွေ့အောင် စီမံချက် ပြုတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့်တွေ ပမာဏများများ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ပြီး စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်တတ် ပါတယ်။ တချို့စားသောက်ဆိုင် တွေမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသောက်လို့ ရနိုင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကို မရွေးချယ်တတ်ခဲ့ရင် အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်စားတာက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
မနက်စာက သင့်တစ်နေ့တာ အတွက် အကောင်းဆုံး လိုအပ်ချက်ပါ။ သင်စားလိုက်တဲ့ မနက်စာကရတဲ့ ကယ်လိုရီကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်နေ့တာ အသုံးပြုမယ့် စွမ်းအင်တွေရအောင် ဖြိုခွဲပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအစာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်နေသူတွေ အနေနဲ့ မနက်စာမစားဘဲ နေတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
သေးသွယ်တဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် လှလှလေးတွေက သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို လှပစေပေမယ့် သင့်ခါးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ လမ်းများများ လျှောက်ရတဲ့နေ့တွေနဲ့ သင့်အလုပ်များတဲ့ နေ့တွေမှာတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စီးတာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လေး စီးပြီး ပွဲတတ်တာမျိုးလောက်ကတော့ သင့်ခါးကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်မယ့်အစားမွေ့ရာနဲ့ ခုတင်ပေါ်မှာအိပ်ပေးပါ။ တကယ်လို့ သင့်မှာ စပရင်ခုတင် အဟောင်းကြီးရှိနှင့်ပြီး၊ အသစ်မဝယ်ချင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာ အထပ်သား သစ်သားပြားခံပါ။ သစ်သားပြားပေါ်မှာ မွေ့ရာထပ်တင်အိပ်ပါ။ မွေ့ရာက ဟောင်းနွမ်းပြီး ပြားကပ်နေရင်တော့ မအိပ်သင့်ပါဘူး။ အသစ်လဲပေးပါ။ ဆိုဖာခုံတွေပေါ်မှာလည်း အချိန်ကြာကြာ ထိုင်မနေသင့်ပါဘူး။
လူအများစုက ခေါင်းအုံးထူထူတွေနဲ့ အိပ်တာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သင်ရဲ့ လည်ပင်း၊ ခါးနဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ သင်အိပ်စက် အနားယူဖို့ တကယ်လိုအပ်တာက မထူမပါး အနေတော် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးပါ။ အဲဒီခေါင်းအုံးက အသုံးပြုတာများလို့ မှို့တွေပိပြားပြီး နဂိုခေါင်းအုံး ပုံသဏ္ဌာန် မဟုတ်တော့ဘဲ ပြောင်းသွားရင် မသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ အသစ်တစ်လုံးလဲပေးပါ။ သင်ဟာ မှောက်အိပ်တတ်သူဖြစ်ရင်တော့ ခေါင်းအုံးပါးပါးတစ်လုံးနဲ့ အိပ်ပေးပါ။ ပက်လက် အနေအထားနဲ့ အိပ်တတ်တဲ့လူ ဖြစ်ရင်တော့ မထူမပါး အနေတော် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးနဲ့ အိပ်ပေးပါ။ ဒါမှ သင့်လည်ပင်းအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ကောင်းတယ်လို့ သိထားပေမယ့် သင်တကယ် လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ ရောဂါဖြစ်လာမယ့် အချိန်ကိုစောင့်မနေပါနဲ့။ သင်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဒီနေ့ပဲ စတင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ မာရသွန်ပြေးရလောက်အောင် မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ကို နာရီဝက်နဲ့ တစ်ပတ်ကို၃-၄ ရက်လောက် လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ အကျင့်ရလာတဲ့အခါ တစ်နေ့ကို မိနစ်၎ဝ လောက်နဲ့ တစ်ပတ် ၄ ရက်လောက် အချိန်ထပ်တိုးပြီး လေ့ကျင့်ပေးပါ။
Posted by Thant Zin Minn at 10:23 PM
Excel Accounting Template Forms
နည်းပညာ၊နိုင်ငံရပ်ဝန်း သတင်းများအား ကဏ္ဍစုံလင်စွာ တစ်နေရာတည်းတွင် လေ.လာ၊ဖတ်ရှုလိုသူများ အတွက်။
သံလွင် (ပြည်တွင်း သတင်းများ)
Portable Software For Window စုစည်းမှု
မိမိစိတ်တိုင်းကျ CV များ ဖန်တီးလိုသူများအတွက် Resume Builder
မြန်မာ သီချင်းများနှင်. Tape ခွေ ဇာတ်လမ်းများ
ဂစ်တာ ဖိုးအေး ဂစ်တာ၊ကီးဘုတ် သင်ခန်းစာနှင်. သီချင်း Notes,Lyrics များ
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း၊အစိုးရ ဌာန အဖွဲ့အစည်း ၊ စသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဆို ၄င်းတို့၏ ငွေရေးေ...
စာ၇င်းရှင်းတမ်းများ လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ဘဏ္ဍာရေး အကြောင်းအချက်များ ဖော်ပြသော အဓိက ရှင်းတမ်းနှစ်ခုမှာ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (Balance Sheet) အရ...
ကုမ္ပဏီ မအောင်မြင်နိုင်ဖွယ် အလားအလာကို ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ စီးပွားရေး လောကမှာ ရှိကြတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်င...
ဇူလိုင် ၁၉ အကြောင်း တစေ.တစောင်း
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် အတွင်းဝန်များရုံးမှာ တိုင်းပြည်ကျွန်ဘ၀က လုံးဝ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ စစ်ြ...
ရပိုင်ခွင့်များ၊ ရင်းနှီးငွေ နှင့် ပေးရန်တာဝန်
ရပိုင်ခွင့်များ၊ ရင်းနှီးငွေ နှင့် ပေးရန်တာဝန် (Assets,Capital , Liabilities) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်ရာမှာ ထိုလုပ်ငန်းအတွက...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ သာဖတ်ပါရန် မေးခွန်း။ ၃ လခံ တားဆေးက ကလေးရအောင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လောက် ပြန်စောင့်ရတယ်လို့ ဆရာပြန်ထားတဲ့ စာထ...
စတို စာရင်း ဘယ်လို Control လုပ်မလဲ စတိုပစ္စည်းများကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုလှောင်ထားခြင်း လိုအပ်သည်ထက်လျော့ နည်းလှောင်ထားခြင်း တို...
*ခံတွင်း ကျန်းမာရေး* သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေ ပါတယ်။ သံပုရာသီး အခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပ...
ဧရာဝတီမြစ် သမိုင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် Irrawaddy သို့မဟုတ် Ayey...
အရေးကြီးသော ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး(၅)ခု အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မှန်ကန်သင့်တော်သောကျွမ်းကျင်မှုမျာ...
အသိဥာဏ် + ကိုယ်ကျင့် တရား
ဆင်းရဲ သား တွေ " ဘာ" လိုသလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့် အချက် ၈ချက် ကျန်းမာရေ...
မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အရေပြားမှိုရောဂါများ “မ...
ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာ ဆိုတာ ဘလော့ဂ်ဂါ မိတ်ဆွေတဦးမှ သူခံစာ...
ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ Premenstrual syndrome (PM...
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...78 ချက်ထဲက ဘယ...
စတို စာရင်း ဘယ်လို Control လုပ်မလဲ စတိုပစ္စည်းမျ...
စံတန်ဖိုး (Standard Cost) သဘောတရား ငွေစာ၇င်းဌာနက ဘ...
ကုမ္ပဏီ မအောင်မြင်နိုင်ဖွယ် အလားအလာကို ကြိုတင်မှန်း...
ဧရာဝတီမြစ် သမိုင်း ...